Kooxaha ‘argagixisada’ oo laga xirayo xogaha ay internetka ku faafiyaan - BBC News Somali
Kooxaha ‘argagixisada’ oo laga xirayo xogaha ay internetka ku faafiyaan
8 Juunyo 2018
Urur ay ku bahoobeen shirkadaha waaweyn ee xagga tiknoolajiyadda iyo waliba qaar ka mid ah dowladaha adduunka ayaa sheegay in guulo laga gaaray dadaalo la samaynayay oo ku saabsan sida kooxaha ku astaysan argagixisada looga xiri lahaa baraha internetka ee ay ku faafiyaan dacaayadahooda.
Shir ay qabatay Google ayaa lagu sheegay in 88 kun oo waxyaabo iyo raadad lagu aqoonsado waxyaabaha ay kooxahan faafiyaan lala wadaagay shirkadaha tiknoolajiyadda si ay uga xiraan adeegyadooda.
Nidaamkan ayaa waxa uu ogolaanayaa in gabi ahaan la is hortaago in wax lagu daaboco internetka ka hor xitaa inta aanan la daabicin.
Hay'adda loo yaqaano Global Internet Forum to Counter Terrorism - GIFCT ayaa sheegtay in bartilmaameedka la doonayo la gaari doono, kaas oo ah in la xiro illaa 100 kun oo waxyaabaha ay kooxaha argagixisada ku astaysan.
Jarmalka oo qaadaya talaabooyin looga hortagayo argagixisada
Shirkadaha mamnuucaya waxaa ka mid ah Google,Facebook, Micrasoft iyo Twitter-ka.
Hay'adan u xil saaran la dagaalanka warfaafinta kooxaha argagixisada ayaa sidoo kale shaacin doonta sifooyin shirkadaha ay isaga hor istaagaan in adeegyadooda lagu faafiyo waxyaabaha markii hore lagu abuuray bogag kale oo aan kuwooda ahayn, islamarkaasna inta badan ay isticmaalaan dadka sameeya waxyaabaha sharci darada ah.
Balse dadka naqdiya arrimahan ayaa sheegaya in laga yaabo in waxyaabo aysan ahayn in la hor istaago laga mamnuuci karo in ay Internetka soo galaan.